Shiinaha Midab Sawireed midab uv midabka midabkeedu isbeddelo by qorraxda Soo-saarista iyo Warshad | Topwell
Midabka sawir-qaadaha waa nooc microcapsules ah. Iyada oo budada asalka ah lagu duubay microcapsules. Qalabka Powder wuxuu beddeli karaa midabka iftiinka qoraxda. Waxyaabaha noocan ah waxay leeyihiin astaamaha midabka xasaasiga ah iyo awoodda cimilada dheer. Waxaa si toos ah loogu dari karaa iyadoo loo eegayo sheyga ku habboon. Waxaan soo saarnaa cabbirka walxaha budada ah wuxuu ku saabsan yahay 3-5 um, fiirsashada qaybaha wax ku oolka ah ayaa ka sarreeya alaabada kale ee la midka ah ee suuqa. Heerkulka iska caabbinta Heat illaa 230 digrii.
Color Midab dhalaalaya, midab xasaasi ah
Resistance Caabbinta heerkulka sare, caabbinta dareeraha
Resistance Caabbinta cimilada oo aad u dheer
Adapt la qabsi adag, fudud in si siman loo kala firdhiyo
♥ U hoggaansanaanta baaritaanka sheyga ee GB18408
1. Khad. Ku habboon dhammaan noocyada qalabka daabacaadda, oo ay ku jiraan dharka, warqadda, filimka synthetic, Glass ...
2. Daahan. Ku habboon dhammaan noocyada wax soo saarka dusha sare
3. Cirbad. Khuseeya dhammaan noocyada pp caag ah, PVC, ABS, caag silicone, sida
sida duritaanka qalabka, wax taaj oo kale extrusion
Midab sawir qaade ah waxaa loo isticmaali karaa ranji, khad, warshad caag ah. Inta badan naqshadeynta badeecaddu waa gudaha (ma leh jawi qorrax leh) midab la'aan ama midab khafiif ah iyo bannaanka (deegaanka qorraxda) waxay leeyihiin midab dhalaalaya
Sawirada Sawirada ayaa aad ugu nugul saamaynta dareeraha, PH, iyo xiirida noocyo kale oo badan oo midabbo ah. Waa in la ogaadaa in ay jiraan kala duwanaansho ku saabsan waxqabadka midabada kala duwan sidaa darteed mid waliba waa in si fiican loo tijaabiyaa ka hor inta aan la isticmaalin ganacsiga.
Midabada sawir qaadaha ah waxay leeyihiin xasillooni aad u fiican marka aad kuleylka iyo iftiinka ka fogtahay Ku kaydi wax ka hooseeya 25 Deg.C. Ha u oggolaan inuu barafoobo, maxaa yeelay taasi waxay dhaawaceysaa kaabsooliyeyaasha sawir-qaade. Soo-gaadhista muddada-dheer ee iftiinka UV waxay hoos u dhigaysaa awoodda kaabsooliyeyaasha sawir-qaadayaasha ah ee midab beddelidda. Nolosha shelf ee 12 bilood waa la damaanad qaadayaa iyadoo la adeegsanayo in maaddadu ku keydsan tahay jawi qabow oo mugdi ah. Kaydinta in ka badan 12 bilood laguma talinayo.
Xiga: Midabka Thermochromic ee ranjiga thermochromic rinjiga thermochromic khad Thermochromic